यौन : अधिकार कि अपराध ? - मुक्त आकाश - साप्ताहिक
झापामा एक दर्जन जोडी प्रहरी नियन्त्रणमा
प्रहरीले झापाको बिर्तामोडमा सञ्चालित पाँचवटा होटलबाट सञ्चालकसहित ९ पुरुष तथा १२ महिलालाई ‘अनैतिक कार्य’ गर्दागर्दैको अवस्थामा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापा र इलाका प्रहरी कार्यालय, बिर्तामोडको संयुक्त टोलीले भदौ ३ गते होटल सञ्चालकसहित २१ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । नियन्त्रणमा लिइएका सबैलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापामा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बिर्तामोडमा लामो समयदेखि यौनजन्य गतिविधि हुँदै आएको जनगुनासो बढेसँगै प्रहरीले छापा मारेर उनीहरूलाई अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएकै अवस्थामा पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाका प्रहरी नायव उपरीक्षक हरि शर्माले जानकारी दिए ।
(पूर्वेली न्युज अनलाइनको समाचार)
यौन कर्मलाई हाम्रो समाजले जहिले पनि आवरणमा घृणित शब्दका रूपमा लिँदै आएको छ तर पर्दापछाडि भने यसको उपभोग उत्तिकै सक्रियतापूर्वक हुँदै आएको पाइन्छ । शिवलिङ्ग र योनिको श्रद्धापूर्वक पूजा गरिनु तथा मन्दिरका टुँडालहरूमा कुँदिएका यौन आकृतिहरूले एकातिर समाजमा खुलारूपमा यौनको आराधना भैरहेको देखाउँछ भने अर्कातिर यौनको विरोध गरेर यही समाजले पाखण्डी प्रवृत्ति पनि देखाइरहेको छ ।
प्रसंग प्रहरीले होटलहरूमा छापा मारेपछि यति जोडी पक्राउ भनी छापा एवं अन्य सञ्चारमाध्यममा आउने समाचार र त्यसले पार्ने प्रभावको हो । प्रहरीसँगै गएर छापा मार्ने क्रममा लिइएका तस्बिर तथा दृश्य सामग्रीलाई सञ्चारमाध्यममा जसरी प्रस्तुत गरिँदै आएको छ त्यसमा सञ्चारमाध्यम एवं सञ्चारकर्मी पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार भएको पाइन्छ ।
बिनाआधार प्रस्तुत हुने त्यस्ता सामग्रीले कस्तो खालको मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक असर पुर्‍याउन सक्छ भन्ने मूल्यांकन नगरी त्यस्ता सामग्री प्रसारण एवं प्रकाशन गर्नु निर्लज्ज र निकृष्ट कार्य हो । आखिर यौनलाई हाम्रो समाजमा किन यति जटिल विषय बनाइँदैछ ? खुला रूपमा सार्वजनिक स्थलमा हुने यौनजन्य क्रियाकलापलाई त समाज वा कानुनले बन्देज लगाउँदै आएकै छ तर के आपसी सहमतिमा बन्द कोठाभित्र पनि कसैले यौन सम्बन्ध राख्न पाउँदैन ?
किन प्रहरी–प्रशासनद्वारा बन्द कोठाभित्र बसेका श्रीमान्–श्रीमती, प्रेमी–प्रेमिका वा अन्य जोडीलाई आपराधिक काम भन्दै पक्राउ गरी अपमान गरिन्छ ? के यौन सम्बन्ध राख्नु अपराध हो ? यदि यो अपराध हो भने सारा समाज नै अपराधी हो, यदि होइन भने यौन सम्बन्ध राखेकै आधारमा कोही अपराधी हुन सक्छ ? के यौन सम्पर्क गर्न पनि प्रहरी–प्रशासनको वा पत्रकारहरूको स्वीकृति लिनुपर्ने हो ? के प्रहरीलाई होटलहरूमा गएर जसलाई पनि बिनाकारण पक्राउ गर्ने अधिकार छ ?
के अब श्रीमान्–श्रीमतीले होटलमा सँगै रात बिताउन मन लाग्यो भने विवाहको प्रमाणपत्र बोकेर हिँड्नुपर्ने हो ? समाचारहरूमा आएअनुसार कतिपय विवाहित जोडी अनाहकमा समातिएका छन् र उनीहरूको मानमर्दन गरिएको छ । यसले पार्ने सामाजिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक तनावको क्षतिपूर्ति प्रहरी–प्रशासनले कसरी तिर्छ ? यो कानुनको उपयोग हो, दुरुपयोग हो वा शक्तिको तुजुग हो ?
छापा प्राय: सामान्य होटल तथा गेस्ट हाउसहरूमा मारिन्छ जहाँ निम्न मध्यमवर्गीय तथा मध्यम वर्गीय मानिसहरूको पहुँच हुन्छ तर तारे होटलहरूमा प्रहरीले कहिल्यै छापा मार्दैन किनभने त्यहाँ छापा मार्ने हैसियत प्रहरीले राख्न सक्दैन । धनीहरूलाई जहाँ पनि छुट छ तर यो देशमा गरिबहरूलाई यौन सम्पर्क राख्ने छुट पनि छैन । के यौन धनीहरूको मात्र बपौती हो ? के यौन सम्पर्क राख्नु भनेको चरित्रहीन हुनु हो ?
जैविक विज्ञानअनुसार किशोरावस्थाको विकाससँगै हरेक मानिस यौनका लागि योग्य हुँदै जान्छ र किशोरावस्थाको अन्त्यसँगै ऊ शारीरिक रूपले यौन सम्बन्ध राख्न परिपक्व हुन्छ । स्वस्थ मानिस र प्राणीमा यौन चाहना हुनु स्वाभाविक एवं प्राकृतिक कुरा हो । यो हरेक प्राणीको जैविक आवश्यकता पनि हो । यौन कुण्ठा पालेर राख्नुभन्दा यसको सही तरिकाले उपभोग गर्नु अर्थात् व्यवस्थापन गर्नु स्वास्थ्यका हिसाबले पनि राम्रो मानिन्छ । यौनलाई दबाएर राख्दा त्यसले मनोवैज्ञानिक असर पार्ने र कालान्तरमा यौन अपराधसम्म पुग्न सक्ने पनि अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । समाज विज्ञानअनुसार पनि यौनका विषयमा मानिसले सानै उमेरदेखि देख्दै, सुन्दै तथा पढ्दै आएको हुन्छ र यो विषयसम्बन्धी खुल्दुली उमेरको विकासक्रमसँगै बढ्दै जान्छ भने मनोवैज्ञानिक रूपमा भोगेरै यो विषयका सम्बन्धमा जानकारी लिने इच्छा हुनु स्वभाविक हो ।
हाम्रो समाजमा यौनलाई जहिले पनि विवाहसँग जोडेर हेरिन्छ । के साँच्चै यौन सम्बन्ध विवाहपछि मात्र राख्न हुने वा पर्ने हो त ? यौनलाई विवाहसँग किन जोडिएको होला ? कुनै बेला थियो जब गर्भनिरोधक अस्थायी साधनको आविष्कार वा प्रचलन थिएन त्यतिबेला विवाह पहिले गरिने यौन सम्बन्धले गर्भ रहेको अवस्थामा आइपर्ने झन्झट र त्यसले व्यक्ति, परिवार र समाजमा पार्ने असरलाई मूल्यांकन गर्दै त्यसो भनिएको हुन सक्छ तर आज विज्ञानले धेरै फड्को मारिसकेको छ । यौन अब परिवार र समाजको नियन्त्रणमा छैन, यसलाई मानिसहरूले व्यक्तिगत अधिकारका रूपमा लिन थालिसकेका छन् ।
अब अभिभावकहरूले पनि यौन सम्बन्ध राख्नु हुँदैन भन्नुभन्दा पनि बरु बलात्कारचाहिँ गर्नु हुँदैन र कसरी सुरक्षित यौनसम्पर्क राख्ने भनेर सिकाउनुपर्ने समय आएको छ । यसो गर्दा अभिभावक र छोराछोरी दुवैलाई यौन अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ किनभने कुनै पनि छोराछोरी आज म यौनसम्पर्क राख्न जाँदैछु भनेर जानकारी दिएर जाँदैनन् । त्यसैले बेलैमा यौन शिक्षा दिनु उपयुक्त हुन्छ । यौन वयस्क भएपछि हरेक युवायुुवतीमा एक–अर्कामा आकर्षण भई स्वभाविक रूपमा हुुने कुरा हो । के यो प्राकृतिक कुरालाई कानुनका दफा वा समाजका ठूला आँखाले रोक्न सक्छ ? यो प्राय: असम्भव दुस्साहस हो किनभने खाने मुखलाई जुँगाले छेक्न सक्दैन ।
अब कानुन वा समाजले यसलाई कसरी रोक्नेभन्दा पनि कसरी व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्नेतर्फ सोच्नु बुद्धिमानी हुनेछ । आपसी सहमतिमा कुनै प्रेमी–प्रेमिका वा जोडीले होटलको बन्द कोठाभित्र यौन सम्बन्ध राख्न किन नपाउने ? होइन भने यौनका लागि कहाँ जानुपर्ने हो ? राज्यले यसको निधो दिनुपर्‍यो । हाम्रो समाज यस्तो पाखण्डी समाज हो जहाँ वेश्यावृत्ति पनि भैरहेकै छ र त्यसका लागि निश्चित ठाउँ तोकौंभन्दा पनि विरोध आइरहेको छ । आखिर यही समाजकै मानिसको उपस्थितिमै त यी सबै गतिविधि चलिरहेको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा यौन सम्बन्ध राख्नु र वेश्यावृत्ति गर्नु एउटै कुरा होइन । अब अनावश्यक ढोंग देखाउन छोडेर वेश्यावृत्तिलाई पनि सामाजिक र कानुनी तवरले व्यवस्थित गर्नु र त्यसको सही कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्नु अति आवश्यक भैसकेको छ । बन्द कोठाभित्र आपसी सहमतिमा यौन सम्बन्ध राख्न पाउनु हरेक उमेर पुगेका मानिसको नैसर्गिक एवं व्यक्तिगत अधिकार हो ।
यसलाई अपराध देख्नु समाज, प्रहरी र कानुनको दिवालियापनबाहेक केही होइन । त्यसको साटो यौन कर्मलाई अनुशासित बनाउने कानुन बनाउन बहस चलाउनु तथा यौन अपराध रोक्न चेतना जगाउने सामग्री प्रकाशन एवं प्रशारण गर्नु उचित हुन्छ । अब सबै मिलेर यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने निचोडमा पुगी कदम चाल्नु नै समयको आवश्यकता एवं यो समस्याको समाधान हो ।
स्नातकोत्तर, समाजशास्त्र, त्रि.वि.